Nepal: Tabataba Manoloana Ny Grevy Fanakatonana Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2018 6:40 GMT
Nisy fiantraikany ho an'ireo bilaogera ny fanapahan-kevitry ny Fikambanan'Orinasa Mpanome Tolotra Aterineto tao Nepal (ISPAN) tamin'ny fanakatonana ny tolotra aterineto nandritra ny adiny roa — adiny iray avy ny maraina sy ny hariva. Anisan'ny fandaharan'ny hetsi-panoherana nambaran'ireo tomponà indostria tao Nepal manohitra ny fidarohan'ny Maoista ny mpitantana hotely iray ny fanakatonana. Saingy tezitra tamin'ny fanakatonana aterineto ny ankamaroan'ireo bilaogera izay efa nanameloka ny hetsika nataon'ny Maoista. Samy manana ny filazany momba io olana io ireo bilaogera avy ao Nepal raha namerina indray ny tolotr'izy ireo nandritra ny andro ny ISPs (Mpanome Tolotra Aterineto) ka tafiditra antserasera ny rehetra.
Hoy i My Sansar nanoratra raha niresaka momba ny fanakatonana :
Nampiasa teny mahery ny United We Blog! mba hanamelohana ny fanakatonana ary niantso izany ho hadalana sy nangataka onitra ho an'ny mpanjifa ary ny hetsiky avy amin'ny vahoaka mba tsy hisy intsony ny fanakatonana.
Namaritra toe-javatra iray nitranga taminy i Mero Guff izay tsy nahafahany niditra antserasera tamin'ny asa iray lehibe tokony nataony rehefa nahafantatra momba ny fanakatonana tamin'ny alàlan'ny biraom-panohanan'ny ISP izy, tsy nampino azy izany :
Nanatevin-daharana ny ‘hetsi-panoherana fanakatonana aterineto’ ihany koa ny The Radiant Star ary nilaza fa tsy misy olona mahazo tombony amin'ny fanakatonana: